स्वादिष्ट: ठीक छ, ठीक छ, मलाई थाहा छ तपाई मध्ये धेरैलाई यस्तो पढाई हुन सक्छ तपाईको स्वादिष्टको बारेमा पहिले नै थाहा छ। मैले यसबारे पनि थाहा पाइसकेको छु, तर सामाजिक साझेदारीको विकास नभएसम्म यसले यत्तिको प्रभाव कहिल्यै पाएन। मलाई मन पर्छ कि म बुकमार्क गर्न सक्दछु र टाग गर्न सक्दछु र जे भए पनि मँ जुन कम्प्युटरमा छु, जहाँ म छु, मँ त्यहाँ सधैं मेरो मनपर्ने गर्दछु। मैले याद गर्न चाहेको ती सबै लि find्कहरू फेला पार्न द्रुत र सजिलो ठाउँको उल्लेख नगरी। भर्खरको ब्लग पोष्ट जस्तै वेबिनार आमन्त्रित गर्दछ, वा लेख पनि।
Picnik: फेरि, बजारहरू रचनात्मक व्यक्ति हुन् र हामी चुटकीमा डिजाइन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। म आवश्यक पर्दा डिजाईन गर्न सक्दछु, तर जब मलाई केहि छिटो, सरल र सजिलो चाहिन्छ ... म पिकनिक छनौट गर्दछु! विशेष गरी ती प्रोजेक्टहरूका लागि तपाई मस्तिष्क शक्ति बिना नै अलिक मसला लिन चाहानुहुन्छ। तिनीहरूको ईन्टरफेस प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ र फेरि कुनै पनि वेब-आधारित अनुप्रयोग जस्तै… .तपाईँ तपाइँको चित्रहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
Google Apps: म गुगल भक्तको जस्तो आवाज लिन चाहन्न किनकि अन्य धेरै मार्केटरहरू जत्तिकै म तिनीहरूको खोजीमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्दैछु भनेर म सधैं विचलित हुन्छु। यद्यपि डेलिभ्रामा हामी सबै गुगल अनुप्रयोगबाट सबै चीजका लागि काम गर्छौं र मलाई निश्चित छ कि कुनै पनि डेस्कटप सफ्टवेयरको तुलनामा लागत बचत ठूलो छ, म मेल, क्यालेन्डर, साइटहरू (जुन हामी प्रेम गर्दछौं) बाट बिभिन्न अनुप्रयोगहरूबाट प्रभावित छु। कागजातहरू, तपाईले यसलाई नाम दिनुहुन्छ। अब मलाई थाहा छ यो उत्तम छैन, तर पहुँच र तथ्य यो हो कि क्र्याश हुँदैन एक दिन मलाई बेचेको छ।
स्मार्टशीट: यो सम्भवतः एक मात्र अनुप्रयोग हो जुन तपाईं धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। म स्मार्टसिट मन पराउँछु किनकी म स्थिर सूची निर्माता हुँ। म कसरी दैनिक कुरा गर्ने हजारौ चीजहरूको ट्र्याक राख्न सक्छु? कुनै पनि घटनामा, अनुप्रयोगले मलाई बहु कार्य गर्न मद्दत गर्दछ जहाँ म तिनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा रँक गर्न सक्छु, अन्यसँग साझेदारी गर्न, कहिँ सम्पादन गर्न, प्रिन्ट गर्न वा जहाँ म भए पनि पहुँच गर्न सक्दछु।